Mieritreritra ny handeha amin'ny tetezana manaraka? | Fitsangatsanganana tanteraka
Mieritreritra ny handeha amin'ny tetezana manaraka?
Fitsangatsanganana tanteraka | | Prague, Roma
Raha mpandehandeha be mpandehandeha ianao dia mety efa manana maso mijery azy tetezana novambra. Ny fiverenana amin'ny fahazarana sy isan'andro isan'andro dia toa tsy dia mafy loatra rehefa fantatrao fa afaka fotoana fohy dia hankafy fialan-tsasatra indray ianao izay ahafahanao mamerina ny fihetsem-po ateraky ny dia.
Indraindray tsy mora izany, amin'ny fahavaratra dia mandany vola be tsy ampoizina amin'ny fanampiny izay azontsika sorohina tsara. Fa eo ny fakam-panahy, ary ny terraces misy tapas sy labiera matetika dia mandray ny vokany. Dia toy izany hatrany mitady tolotra izahay, fihenam-bidy ianarantsika akory ny fomba hahazoana indram-bola hanohy ny dia.
1 Torohevitra hampihenana ny vidiny amin'ny fialan-tsasatrao manaraka
2 Jereo i Eoropa amin'ny tetezana Novambra
Torohevitra hampihenana ny vidiny amin'ny fialan-tsasatrao manaraka
Con viaconto, ny marina dia mora kokoa ny zava-drehetra, na eo aza izany dia hanome làlana vitsivitsy momba ny motera fikarohana hampiasaina izahay, fampiharana, carte de crédit, fika hahitana fijanonana miaraka amin'ny teti-bola ambany, sns.
Ny tendronay voalohany dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra. Hanampy anao hitahiry sy ho afaka hiaina dia sy fitsangatsanganana matetika kokoa noho izay noeritreretinao hatrizay ... Ny torohevitra dia hoe mahasalama, ity no tsiambaratelo nafenina tsara indrindra ho an'ny mpandeha antonony rehetra. Miaina ao anaty fiarahamonina feno fitsiriritana sy fakam-panahy maka ny saintsika isika ary farany mividy zavatra tsy ilaina mihitsy. Raha manapa-kevitra ny hampihena ny fikasana fanampiny ianao dia tsy ho mora izany, fa ho hitanao ny fomba hitsimbinana anao haingana sy hankafizanao fitsangatsanganana bebe kokoa.
Fampiharana ilainao eny na eny amin'ny finday avo lenta. Skyscanner no maotera fikarohana fikarohana mora vidy indrindra. Manolotra karazany maro izy ary ny tsara indrindra dia ny hikarohanao ny volana tianao hitetezana sy hahitana hoe andro iza no mora indrindra. Zava-dehibe ny mandany fotoana mitady sidina mora vidy, satria matetika izy ireo no iray amin'ny zavatra lafo indrindra amin'ny dia ataonao.
Fampiharana tena ilaina iray hafa izay tsy very ao amin'ny findaiko mihitsy Mapsme. Rindrambaiko tsotra toy ny google maps izy ity fa feno kokoa. Dite ampidino ny sari-tany ilainao ary raha vao sintonina ianao dia azonao ampiasaina an-tserasera ary tena mandeha tsara. Ity fampiharana ity dia manolotra karazana fikarohana isan-karazany toy ny hotely, trano fisakafoanana, teboka mahaliana amin'ny faritra, sns. Mandroaka ahy fotsiny izy io.
Ary farany ao anatin'ny zavatra ilaina, Booking ary Airbnb. Ireo dia rindranasa hahitana trano hipetrahana ary miasa mahafinaritra izy ireo. Azonao atao ny mandamina ny fikarohanao arak'izay ilainao ary ho hitanao fa tsy handiso fanantenana anao ny valiny. Ny iray amin'ireo torohevitra omeko dia ny mandany fotoana mitady trano honenana, toy ny amin'ny sidina, Raharahan'ny fotoana ny fitadiavana ny tena varotra ary vintana kely fotsiny. Eny, araky ny nolazaiko dia mifidiana andro iray ary atombohy ny fikarohanao trano hipetrahana. Mitandrina! Aza mijanona afa-tsy amin'ny valiny voalohany, mikorisa ary ho hitanao ny fisehoana tolotra tsara kokoa ao anatin'ny fampiharana aorian'izay. Aza adino fa ny safidy izay miseho voalohany dia nampiroborobo ny toerana voalohany fa tsy ny mora indrindra foana. Indraindray dia mahaliana ihany koa ny mampifanohitra ny vidiny mivantana amin'ny hotely, tandremo fa ireo karazana fangatahana ireo dia mitaky isan-jato ho an'ny mpitantana, ary indraindray ny hotely dia manolotra vidiny hafa na koa fampiroboroboana manokana.
Saika hadinoko! Miankina amin'ny firenena andehananao izany, tsy maintsy manana fanomezana ianao amin'ny fifanakalozana vola. Ahoana ny fampitahana an'io vola io amin'ny euro, ny vidin'ny fiainana ao an-tanàna tadiavinao ho hita ... Zava-dehibe ny fandinihana kely ny faritra mba tsy hisy hahagaga anao. Raha ny fifanakalozam-bola dia mamporisika anao izahay hampiasa karatra mety tsara amin'ireo fotoana ireo, misy maromaro, fa ny tsara indrindra dia ny Bnext. Misaotra amin'izany ianao afaka mamindra amin'ny karatra anao manokana, mankany amin'ny carte Bnext ary misintona vola miaraka amina komisiona kely any amin'ny firenena rehetra, ary koa amin'ny tahan'ny fifanakalozana tsara indrindra hatrany. Ny zavatra iray tena mahaliana dia ny ahafahanao manakana sy mamelona ny karatrao amin'ny findainao raha mandalo faritra izay miteraka tsy fahatokisana ianao na te-hanakana azy io fotsiny rehefa tsy mila mampiasa azy.
Torohevitra tsara, ha? Ho an'ireo be mpandeha amin'ny dia indrindra, tsy torohevitra vaovao ireo torohevitra ireo, na angamba izany, saingy manantena aho fa afaka mampihatra torohevitra vitsivitsy ianao.
Jereo i Eoropa amin'ny tetezana Novambra
Roma dia toeran-kaleha tsy handiso fanantenana velively
Izaho manokana, amin'ny faran'ny herinandro amin'ny volana novambra dia aleoko ireo firenena sy tanàna manana firavaka nefa miaraka amin'izay dia tsy dia lavitra loatra. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha manana andro vitsivitsy ianao, dia tsy fotoana tokony handehanana lavitra raha tsy manomboka doka mahafinaritra ianao nefa tsy manana tapakila miverina. Tamin'ny Novambra, izahay dia mamporisika ny handeha any Eropa tsy isalasalana fa ireto misy tolo-kevitra vitsivitsy:
Mandosira mankany Belzika ary mankafy an'i Bruxelles, Ghent ary Bruges amin'ny dia iray ihany.
Budapest, toerana tandindona ary koa manokana. Mamo amin'ny hatsarany.
Tsidiho ny Prague majika, mandehana mamaky angano amin'ny tena fiainana.
La Roma kilasika izay tsy hevitra ratsy velively, feno kolontsaina gastronomika sy maritrano tsara tarehy.
Hatreto dia ny tolo-kevitray momba ny tetezana manaraka amin'ny Novambra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Mieritreritra ny handeha amin'ny tetezana manaraka?
Inona no tokony hotadiavinao hanofa karana?